Okwu maka Mobile Optimization | Martech Zone
Njikarịcha ekwentị na-agbanwe agbanwe ọ bụghị naanị otu ndị mmadụ si ekwurita okwu na ibe ha, kama otu ha si ebi, ọrụ na ụlọ ahịa.
Dị ka ị maraworị, mmụba nke iji ngwaọrụ mkpanaka agbasawo dị ka ọkụ ọkụ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị ọkachamara kwenyere na ọnụọgụ nke ngwaọrụ mkpanaka ga-erute ijeri 7.3 site na 2014, na-akwado na enwere mgbanwe mgbanwe ekwentị na-aga n'ihu. Maka ndị na-ere ahịa, ọ bụ ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu: ị nabatagharị agagharị ma gbanwee usoro ịntanetị gị iji dabaa ụwa ọtụtụ ihuenyo, ma ọ bụ nyefee ngwa ọgụ gị wee daa nwayọ nwayọ, mana ejiri n'aka.
Dabere na Mashable, 2013 bụ “afọ nke na-anabata ebe nrụọrụ weebụ na-emeghachi omume,” na-eme ka mkpa maka weebụsaịtị na ngwa dị iche iche kachasị mma maka nha ihuenyo niile. Na 90% nke ndị mmadụ na-eji ọtụtụ ihe ntanye oge, na 67% nke ndị na-azụ ahịa na-amalite na otu ngwaọrụ ma mezue zụta ha na nke ọzọ, mkpa maka ahụmịhe mmiri dị mkpa.
Nke a bụ anya zuru ezu na data site na Nweta afọ ojuju:
Tags: Mobile na Mbadamba ụrọnjikarịcha ekwentịnjikarịchanhazi mmeghachi omumeanabata web design
Mgbasa ozi: Otu ndi ahia si merie agha maka nlebara anya ha